ဖယ်ဒရယ် စနစ်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရန်လို | ဧရာဝတီ
ခင်ဦးသာ| November 9, 2012 | Hits:4,854
7 | | ဖက်ဒရယ် ဥပဒေကြမ်းသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ၏ ဇယား ၂ ကို အခြေခံ၍ ရေးဆွဲပေးရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌက လမ်းညွှန် ထားသည် (ဓာတ်ပုံ- Reuters)
ရခိုင် ရေနံပိုက်လိုင်း လုပ်ငန်းခွင် တရုတ်နှင့်မြန်မာ ၀န်ထမ်း ပဋိပက္ခ လူ ၂၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရ
NCCT အစည်းအဝေးများနှင့် ပတ်သက်သည့် အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာတခု ထွက်ရှိနိုင်
3 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website james November 9, 2012 - 6:53 pm	တကယ်ပေးချင်ရင် လွယ်လွယ်လေးပါ
မြန်မာနိုင်ငံလို့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာ တိုင်းရင်းသားအားလုံးစည်းလုံးခဲ့လို့ ပါ
ခေါင်းဆောင်တွေ ညံ့ဖျင်းလို့ သာ ကွဲကြပြဲကြနဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ
တိုင်းရင်းသားတွေဘ၀ နိမ့်ကျခဲ့တာ အားလုံးအသိပါ
ဒီနေ့အလင်းရောင်သန်းနေပါပြီ
ဒီနိုင်ငံဟာ တစ်နေ့ တော့ ကွယ်ပျောက်မှာပါပဲ၊ လူတွေလဲ သေကြရမှာပဲ
အတစွဲ၊ ၀ါဒစွဲ၊ လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲတွေ ပျောက်သင့်ပါပြီ
နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ ၊ လူဟာလူနဲ့ တူအောင် လုပ်ပေးနိုင်သူက ၀ိုင်းကူလုပ်ရအောင်
မိတ်ဆွေ သေရင် ရာထူး၊ စည်းစိမ် ယူသွားလို့ လဲမရပါဘူး
သူ့ အရည်အချင်းရှိရင် ခင်ဗျားတစ်ပြားမှမထားလဲ ဖြစ်မှာပါပဲ
လူစိတ်ရှိရင် ဖက်ဒရယ်က ဘာမှခွင့်မပြုစရာမရှိပါဘူး
ဘယ်ဘုရားက ဖက်ဒရယ်မကောင်းဘူးလို့ ပြောလို့ လဲ
ဖက်ဒရယ်ခွင့်မပြုချင်တဲ့သူက ဘယ်ဘာသာဝင်မို့ လဲ
Reply	so so November 11, 2012 - 7:50 pm	Never ever think and consider for Federal.Will never allow for federal.
Reply	ohnmar December 24, 2012 - 3:24 pm	federal ကိုကြောက်ကြသောသူများကိုမေးချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကြောက်ရတာလဲ